Olo-manga mahamangana vahoaka | NewsMada
Enti-milaza fahatsarana amin’ny Malagasy ny loko manga: manga feo, olomanga, voromanga, fary manga… Zava-doza kosa ny hoe mangana: mivalomainty, vizana. Miasa irery ny mangana, miaritra irery.
Amin’izao toe-draharaham-pirenena izao, mba irariana ho manga amin’izay ny lanitry ny ambanilanitra na ny valalatsimandadiharona. Efa mangan’ny fiaretana ny mafy sy mangidy fa tsy ny manganana hatramin’izay.
Tsy fandriampahalemana efa zary fanahiana fikomiana na adim-poko amin’ny faritra sasany, fiakaran’ny vidim-piainana na eo aza ny hoe fidinan’ny vidin-tsolika, tsy fisian’ny famoronana asa efa ho lava…
Santionan’ny fahasahiranana mahamangana irery ny vahoaka ireo, fa tsy mbola hita izay manga na manganana amin’izany. Miandry sy manantena fanovana. Sao mangana irery amin’ny fiandrandrana lanitra ho manga?
Tsy vitan’ny hoe mangana irery amin’izany ny vahoaka, fa mangina. Na miteny tsy misy mpihaino: tsy mbola mahamaika tsinona, tsy manohintohina ny tena sy ny toerana, tsy ahazoana fa mandany izay azo aza…
Tsy vitan’ny hoe olo-manga ny raharaha, na izay manga feo no inoan-teny, na hoe manga ny resaka… Mila asa haingana sy mivaingana, maharitra sy mahahenika ny rehetra hatrany ifotony. Mby aiza amin’izao?
Amin’izay, mba mety ho olomanga ihany ny olo-manga… tena miasa? Kibo mitsara tena ny tsirairay, tsarain’ny tena amin’ny asa koa. Sao fatra-pitady ny manganana, ka ho tojo ny mangidy tsy ho telina?
“Tsy mahantra olomanga i Madagasikara, fa mahantra olo-marina”, hoy ilay mpanoratra iray izay. Tsy olomanga na izay olo-manga loatra no tsy misy na tsy ampy, fa ny olo-marina amin’izay lazainy sy ataony.
Tsy lazaina intsony kosa ny olo-mangana: ny vahoaka vizan’ny fahasahiranana, mivalomainty noho ny dona etsy sy eroa: tsy fandriampahalemena, fidangan’ny vidim-piainana, haintany sy kere, tondra-drano…
Hahamanga ny lanitra ve ny olo-manga sa hahamangana vahoaka noho ny fahasahiranan-dava mihalalina sy maharitra? Eny, na toa manga avokoa azy izay jerena: tsy volamena izay rehetra mamirapiratra.